Posted by မောင်ဘုန်း at 2:19 AM 1 comments
ရွှေရည်ရယ် ဖြန်း လန်းလို့ဖြင့် ရနံ့ ထုံ တယ် ပိတောက် ငယ် ငုဝါ တွဲတော့ ဆေးပန်းချီ ငေးမှိုင် လေ …. ပေါ့ နှစ်ဆန်း ရယ် …. ။ သည်အ...
တပြည်စီ က လွမ်း ပုံကို နှိုးထ လေ ရော့ … သည်မိုး ရယ် ….. အကြောင်း ရှာလို့…. မဖြေ သာ နေပူ လည်းလွမ်း ….. မိုးရွာ လည်းလွမ...
ချစ်သူမျက်နှာ ရွှင်ပြ မမြင်ရ အချိန်တွေကြာ ညယံတွေ အဖော်ပြုလို့မှေးစက်ကာ မပျော်ဘူး မရွှင်းသာ လွမ်းဆိပ်က စူး …..။ မျှော်...
ဆောင်းဟေမာန် ဆန်းထလို့ငွေနှင်းက မှုံ လေညင်းက သုန် ပြန်တော့ မှေးစက်ရာ ရွှေနန်းထက်ဝယ် ခိုက်တုန်လို့ချမ်း …. ။ ဆောင...
ကားဆေးအရောင်းများ နှင့် ကားဆေးများအကြောင်း
မင်္ဂလာပါဗျာ … ။ ဒီနေ့အလုပ်နားရက်လေးမို့ကားဆေးရောင် နှင့် ကားဆေးအမျိုးစားများ အကြောင်းကို သိသလောက်လေး ပြောပြပါမယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိသမျှ က...
ဒီေ န့ ညနေ ၄နာရီ ခွဲ ထိထိအချိန် အလုပ်ထဲမှာ accident တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ယောက် မျက်လုံးထိသွားပါတယ် ။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဆေးရုံပ...
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ဗျာ …. ဒီ post လေးကိုတော့ မြန်မာပြည်က သူငယ်ချင်း များအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးရေးဖြစ်တာပါ … ကျနော် တို့ နိုင်ငံမှာ ယနေ့အရေ...
Happy anniversary ပါချစ်သူ ။ ချစ်ခြင်း နေ့ ရက်တွေ ၂ နှစ်ပြည့်ပါပြီ ။ ကုန်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ နေ့ ရက်တွေမှာ ကြည်နူးမှုတွေ ၊ ပျော်ရွှင်...
မင်္ဂလာပါဗျာ …. ဆားပုလင်း ကို အောင်ထွဋ် က ကရဝိတ်ကြီး ရဲ့ နှုတ်သီး မှာ ကိုက်ထားတဲ့ အသီးလေး စိတ်ဝင်စား ပါတယ် တဲ့ … ဘာကြောင့် ကိုက်ထားတာ လည်း...
မင်္ဂလာပါ ... ဗျာ ..ဒီနေ့လိုင်းပေါ်ရောက်ရောက် ခြင်း မင်္ဂလာရှိတဲ့ သတင်း နှစ်ခု ကြားခဲ့ရပါတယ် ... တစ်ခုကတော့ ကျနော် တို့ လို ပြည်ပ မှာ အလုပ...